घोडामा सवार व्यक्तिलाई पनि मापसेबापत जरिवाना | Janakhabar
घोडामा सवार व्यक्तिलाई पनि मापसेबापत जरिवाना
काठमाडौँ, १५ फागुन । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी साधन चलाउन विभिन्न मुलुकमा रोक लगाइएको छ । तर मापसे गरेर घोडामा सवार व्यक्तिलाई पनि भारी रकम जरिवाना गरिएको घटना भने धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । कयौं मुलुकमा मापसे गरी सवारी साधन चलाउनु अपराध मानिन्छ र त्यसबापत चालकले सजाय तथा जरिवानासमेत तिर्नु पर्दछ । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा भने मापसे गरेर घोडामा सवार भएका एक व्यक्तिलाई दण्डित गरिएको छ ।
समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार २९ वर्षीय लुइस परेजलाई मापसे गरी व्यस्त सडकमा घोडा दौडाएको आरोपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनको शरीरमा निर्धारित मापदण्डभन्दा दोब्बर बढी अल्कोहल पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
क्यालिफोर्नियाको हाइवे प्रहरीले उनलाई ५० हजार डलर जरिवाना तोकेको छ । प्रहरीले उनीमाथि गरिएको कारवाहीबारे ट्वीटरमा जानकारी दिएको हो । प्रहरीका अनुसार लुइसले मापसे गरी सडकमा घोडा दौडाउँदा कसैलाई कुनै प्रकारको हानी–नोक्सानी भएको थिएन तर मापसे गरेका कारण उनीमाथि कडा कारवाही गरिएको हो ।
मापसे गरेर कसैले पनि जनावरको जीवन खतरामा पार्न नमिल्ने भन्दै प्रहरीले भनेको छ, ‘सडक सबैको साझा हो, नशामा तपाई कार चलाउनुस् या घोडा चढ्नुस्, दुवै उस्तै अपराध हो ।’ -एजेन्सी
मुकेश अम्बानीकी छोरीको बिहेमा १५ अर्ब- ..
रोबोट जस्तै मोडल !
फोनमा कुरा गर्दा गर्दै आत्महत्या
दुर्लभ ‘पिंक लिगेसी डाइमण्ड’ ५ करोड अमेरिकी- ..
समाचारवाचन गर्ने रोबोट !
प्रधानाध्यापकसहित ८२ विद्यार्थीको अपहरण
९६ वर्षीय हजुरआमा ‘क्लास टपर’ !
पूर्व नर्सद्वारा एकसय बिरामीको हत्या- ..
१२ वर्षमा एक पटक फुल्ने फूल !
५५ किलोमिटर लामो पुल !